Sagalee Qeerroo (SQ): Godina Gujii aanaa Shaakkisoo keessatti shira mootummaafi abbootiin qabeenyaa xaxaa jiraniin uummanni Oromoo qe'eerraa buqqa'aa jira. Kichuu
HomeAfaan OromooNewsSagalee Qeerroo (SQ): Godina Gujii aanaa Shaakkisoo keessatti shira mootummaafi abbootiin qabeenyaa xaxaa jiraniin uummanni Oromoo qe’eerraa buqqa’aa jira.
Godina Gujii aanaa Shaakkisoo keessatti shira mootummaafi abbootiin qabeenyaa xaxaa jiraniin uummanni Oromoo qe’eerraa buqqa’aa jira.
Sagalee Qeerroo (SQ): Guraandhala 10/2019
Bara 1988 (ALH) irraa kaasee uummanni Oromoo Baha Oromiyaa Godina Harargee keessaa gara Godina Gujii aanaa Oddoo Shaakkisoo qubsiifamanii turan. Bakka sanatti qabeenyaas horatanii jireenya ofii geggeeffataa haga ammaa turaniiru. Tibba kana guyyaa 15 dura qaamni mootummaa aanaa sanaa uummata waltajjii kaa’uun “uummata qubataa Harargeerraa dhufe kana of keessaa baasaa, nutis isin gargaarree baafna” jechuun mariisisaa turan.
Haala sana hordofuun qaamni mootummaa kun abbootii qabeenyaa qindeessanii guyyaa kaleessaa (Guraandhala 9/2019) “guyyoota lamaan kana keessatti akka araddaa kana gad lakkiftanii baatan; yoo ba’uu baattan nutu isin baasa” jechuun uummata jireenya ofii geggeeffataa jiru jeequun namoonni hedduun qe’ee ofii dhiisanii bakka adda addaatti dheessaa akka jiraniifi qabeenya isaaniillee qisaasessaa jiru.
Qaamni gocha farrummaa kama Sababa kanarraa kan ka’kana qindeessaa jiru “guyyaan boruu (Guraandhala 11/2019) guyyaa xumuraa keessani” waan jedhanii uummanni yeroo ammaa kana haala yaaddessaa keessa jiru.
Gocha kana adda durummaan gochaa kan jiru qaama bulchiinsa mootummaa Godina Gujiifi kan aanaa Oddoo Shaakkisoo, akkasumas abbootii qabeenyaa lafa sanarraa uummata buqqaasee irratti duroomuu barbaadu akka ta’e mirkanaa’eera. Sababa ifaa shira xaxxoonni kun himatan “uummata Harargeerraa shufe kanatu WBO sooraa jira, isaantu jiraachisa” jechuun akka bakkicha gadhiisanii ba’an dirqisiisan. Shirri dhokataa garuu uummata kana buqqaasanii lafa sana irratti hojii qabeenya horachuu hojjetachuuf akka ta’e ni beekama. Lafti sun lafa albuudaati waan jedhameef Abbootiin qabeenyaa fi mootummaan waliin ta’uun uummata qe’eerraa buqqaasuuf aggaammatanii jiru.
Namni Ilfinee Dulloo jedhamu aanaa Shaakkisoorraa gaafa 24/5/2011 (ALH) uummta wal ga’ii kaa’uun akka uummanni naannoo sanaa uummata Oromoo waggaa hedduu dura Harargeerraa bakka sana qubate of keessaa baasu ajaja dabarse.
Aanaa Oddoo Shaakkisoo san kesssa uummata Oromoo Harargeerraa achi qubatan qofa utuu hin taane saboonniifi sablammoonni biyyattii biroon ni jiru. Addatti mootummaan uummata Oromoo gosaan walitti buusuuf shira xaxee lola uumuuf hojiitti akka jirutu hubatama.
Har’a maqaa WBO sooruutiin dubbiin haa ka’u malee, isa durallee yeroo adda addaatti aggaammiin akkasii akka tureefi uummata gosaan walitti buusuuf bulchitoonni aanaafi Godinaa waliin ta’uun hojjetaa akka turan jiraattonni shirri irratti hojjetamaa jiru ni himu.
Akka jiraattonni kun jedhanitti, uummanni qe’eefi qabeenya ofiirraa buqqa’uun, lubbuun namaa gaaga’amuufi sabni Oromoo gosaan wal hiree dhiibbaa haganaa walirratti gochuun yaaddoo isaaniiti.
Uummanni waggoota baayyee nagaan waliin jiraataa akka tureefi shira kana xaxuun faayidaa siyaasaafii qabeenyaa argachuuf hojjetaa kan jiru qaama bulchiinsa mootummaa Naannoo Oromiyaa Godina Gujii Bahaafi aanolee adda addaa akka ta’e jiraattonni ifatti dubbatu
Sababa rakkoo caasaan ODP Godina Gujii fi Aanaa Shaakkisoo uumee jiruun uummanni hedduun haga danda’e maatii ofii qabatee qabeenya ofii badheetti gatee baqachaa jira.Uummanni Oromoo shira mootummaan dalagaa jiru kanatti dammaqee tokkummaa isaa tikfachuu qaba.
Abiy Ahmed: One of the major demands of Qeerroo is to make Afaan Oromoo federal working language in Ethiopia